Waxyaabaha Keena Cudurada Kudhaca Xoolaha |
Dr. Cabdiraxmaan Max'ed Cabdiraxmaan — June 8, 2019
Cudurada waxa keena ama sababa waxyaabo kala duwan kuwaas oo la xidhiidha hadba inta neefka ay awooddiisa difaac gaadhsiisan tahay. Marka laga hadlayo cudur waxa muhiim ah in mar walba si hufan maanka loogu hayo deegaanka uu bukaanku ku nool yahay, cuntada uu qaatay, wax nabar ah oo ku dhacay neefka iyo waxyaabo kale oo sahli kara in uu neefku xanuun u soo dhaco.
Waxa ugu muhiimsan ee cudur keeni kara waxa ka mid ah, noolayaasha illi-ma qabatay-ga ah sida ( fayraska, bakteeriyada iyo dullinka), cunto sumaysan oo uu neefku qaato iyo nafaqo-darro neefka haleesha.
Dullinadu waa noolayaal xoolaha la noolaan kara haddaan si fiican looga daaawayn loogana hortegin. Dulinka waxa loo qaybiyaa laba qaybood oo kala ah.
Dulin maqaarka sare ama dhogorta xoolaha ku nool sida, shilinta, boodada, tagfida, takarta iyo kuwa la midka ah.
Dulin ku nool oo dega xubnaha hoose ee xoolaha sida, mindhicirada, beerka, sambadada, murqaha iyo caloosha waxaana ka mid ah gooryaannada kala duwan.
Fayrasyadu waa noolayaasha ugu yar-yar ee keeni kara xanuun, fayrasyada laguma arki karo indhaha caadiga ah sidaas si la mid ahna ilaa hadda adduunka laguma hayo wax daawo ah oo lagula tacaalo, sababta oo ah waa kuwo isbedbedela oo aan lahayn qaab qeexan oo lagu garto, hashe yeeshee waxa loo diyaariyay tallaalo ka hortag ah si looga gaashaanto cudurada ay keenaan.
Bakteeriyadu waa mid ka mid ah noolayaasha cudurada ugu badan ku keena xoolaha aynu dhaqano. Bakteeriyooyinka waxa laga helaa oo ay ku noolaan karaan jidha xoolaha dhexdiisa iyo deegaanka caadiga ah.
Fangas-tu waxa ay ku nooshahay oo laga helaa, carrada, hawada iyo biyaha. Fangas-tu waxa ay ku keeni kartaa xoolaha cuduro badan, kuwaas oo inta badan maqaarka xoolaha haleela sida, cambaarta. Waxyaabaha kale ee iyaguna keena cudurada waxa ka mid ah dhibaatooyinka ka dhasha deegaanka sida abaaraha iyo isbedelka cimilada ku yimaada, sidaas si la mid ah waxa keeni kara daaqa sunaysan ee ay xooluhu quutaan.
Maxaa kula gudboon markuu cudur dillaaco?
Daryeelaha caafimaadka xoolaha waxa la gudboon markasta oo uu arko cudur ka dillaacay deegaanka uu joogo :
in uu takooro neefka jirran xeradana ka saaro, si aanu bukaanku ugu gudbin cudurka xoolaha fayaw.
ku caawi bukaankaas wixii daawo ah ama gargaar kale ah ee aad u awoodo.
xidhiidh la samee dhakhtar xoolaad meesha kuugu dhaw, ogaysiina cudurka aad astaamihiisa aragtay.
Tags: Waxyaabaha Keena Cudurada Kudhaca Xoolaha
Next post Siyaabaha Loo Kordhiyo Awoodda Xasuusta Maskaxda
Previous post QIRASHADII JAAJUUSKA INGIRIISKA Iyo Cadawtinimada Ingiriiska ee Islaamka u hayo -Qaybtii 5aad